Trendyol एकीकरण - Amazon, Ebay, Allegro र Etsy सँग ई-निर्यात प्रोपार्स गर्दछ
यो Propars संग तपाइँको Trendyol.com स्टोर व्यवस्थापन गर्न धेरै सजिलो छ!
सबै स्टक स्वतः ट्रयाक छन्। मूल्य र स्टक परिवर्तन तुरन्त प्रतिबिम्बित हुन्छन्
Trendyol बाट आदेशहरु अन्य सबै आदेशहरु संग एकै पर्दा मा एकत्रित गरीन्छ।
तपाइँको ERP कार्यक्रम
उत्पादन र आदेश
उत्पादन / आदेश बजारहरु
यो Propars संग Trendyol.com मा बेच्न धेरै सजिलो छ!
तपाइँ एक्सेल वा XML संग थोक मा Propars आफ्नो उत्पादनहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँ एक एकल क्लिक संग Trendyol मा Propars मा जोड्ने उत्पादनहरु बेच्न सक्नुहुन्छ।
उत्पादनहरु मा थोक अपडेट गर्नुहोस्।
एक क्लिक संग तपाइँको आदेश को लागी नि: शुल्क ई-इनभ्वाइस बनाउनुहोस्
Propars Marketplaces एकीकरण संग एक एकल स्क्रीन मा ई-वाणिज्य प्रबन्ध गर्नुहोस्
सजिलो उत्पादन प्रविष्टि: तपाईंले प्रोपार्समा थप्नुभएका उत्पादनहरू सबै बजारमा एकै समयमा तपाईंको स्टोरहरूमा थप्न र बिक्रीको लागि खोल्न सक्नुहुन्छ।
स्वचालित मुद्रा रूपान्तरण: तपाईंले विदेशी मुद्रामा बेचेका आफ्ना उत्पादनहरू TL मा टर्की बजारहरूमा बेच्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंले आफ्ना उत्पादनहरू विभिन्न देशहरूमा विभिन्न विनिमय दरहरूमा TL मा बेच्न सक्नुहुन्छ।
तत्काल शेयर र मूल्य अपडेट: तपाईं तुरुन्तै विश्वको सबैभन्दा ठूलो ई-वाणिज्य साइटहरू Amazon, eBay र Etsy मा ​​आफ्नो स्टोरहरू र भौतिक स्टोरहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को शब्दमा, जब तपाइँ तपाइँको भौतिक स्टोर मा Propars मा एक उत्पादन बेच्नुहुन्छ र स्टक समाप्त हुन्छ, उत्पादन स्वचालित रूपमा एकै समयमा Amazon फ्रान्स मा स्थित स्टोर मा बिक्री को लागी बन्द हुन्छ।
अधिक बजारहरु: टर्कीका बजारहरू र विश्वका अग्रणी बजारहरू, प्रोपर्सहरू, अवस्थित बजारहरू र नयाँ देशहरूमा निरन्तर थपिँदै छन्।
वर्तमान: बजारमा गरिएका आविष्कारहरू प्रोपार्सद्वारा पछ्याइन्छ र प्रोपर्समा थपिन्छ।
बहु मूल्य: मूल्य समूहहरू सिर्जना गरेर, तपाईंले चाहेको मूल्यको साथ कुनै पनि बजारमा बेच्न सक्नुहुन्छ।
सुविधा व्यवस्थापन: तपाईं सजिलै संग Propars संग बजार मा आवश्यक उत्पादन सुविधाहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ।
उत्पादन विकल्प: तपाईं विभिन्न फोटो र फरक मूल्यहरू परिभाषित गरेर सबै बजारमा रङ र साइज जस्ता उत्पादन विकल्पहरू स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ।
Propars बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
संसारभरि बेच्नुहोस् अधिक कमाउनुहोस्!
Propars को साथ, Amazon, Ebay र Etsy जस्ता विश्वव्यापी बजारहरूमा एक क्लिकमा बिक्री सुरु गर्नुहोस्!
एक स्क्रिन बाट आदेश प्रबन्ध गर्नुहोस्
एकल स्क्रिनमा तपाइँका सबै अर्डरहरू सङ्कलन गर्नुहोस्, एक क्लिकको साथ इनभ्वाइस! यसले बजार स्थानहरू र तपाईंको आफ्नै ई-कमर्स साइटबाट आउने अर्डरहरूको लागि बल्कमा ई-इनभ्वाइसहरू जारी गर्न सक्छ; तपाईं बल्क कार्गो फारम छाप्न सक्नुहुन्छ।
केवल एक पटक Propars आफ्नो उत्पादनहरु अपलोड गरेर, तपाइँ एक एकल क्लिक संग सबै साइटहरु मा उनीहरुलाई बेच्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँ प्रत्येक उत्पादन को लागी अलग पोस्टिंग को बारे मा चिन्ता छैन। उत्पादनहरु को हजारौं केहि सेकेन्डमा पसलहरुमा तपाइँ छनौट मा बिक्री मा हुनेछ।